The Voice Journal – Page 146 – The Voice Weekly Myanmar
“နည်းပညာတွေကို ပြောင်းနိုင်ပေမယ့်လည်း ဥပဒေကြီးက အားနည်းနေတဲ့အခါကျတော့၊ နိုင်ငံတော်က ယူတဲ့ဟာက များနေတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိဘူး” မြန်မာနိုင်ငံထွက် မွေးပုလဲများသည် သဘာဝကို အခြေခံသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သော်လည်း ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူခြင်းတို့ကဲ့သို့ သဘာဝသယံဇာတများ ကုန်ဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစဉ်အဆက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာဖွေပေးနိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ထွက်ကုန်...
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စာအုပ်တွေကနေ ခေတ္တအနားယူဖို့ ဆွဲလာတဲ့စာအုပ်ပါ။ ပြောသာပြောရ ဒီဆရာသမားကလည်း အရွယ်အစားနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် ခုနစ်ခုမြောက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်လိုက်သေးတော့ နိုင်ငံရေးက ပါနေတာပါပဲ။ နိုင်ငံရေးဟာ ရှောင်လို့ကို မလွတ်။...
လူမှန်နေရာမှန် ရွေးချယ်နိုင်ရေးသည် အခြားနေရာများတွင်ထက် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များရွေးသည့်နေရာတွင် ပိုအရေးကြီးသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဆိုသည် သန်း ၅၀ ကျော်ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုရသော၊ ပြည်သူအတွက် အလုပ်လုပ်ကြရသော တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်အဆင့် အရွေးမှားလျှင် ရပ်ကွက်အဆင့် ထိမည်၊ ကုမ္ပဏီအဆင့်အရွေးမှားလျှင် ကုမ္ပဏီအဆင့်ထိမည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တို့မှားလျှင်...
အတက်၊ အကျ ဝိရောဓိဖြစ်နေသော မြန်မာ့စီးပွားရေး မကျပါ။ တိုးတက်မှု ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပင်ရှိနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)၊ အာရှဖွံ့ဖြိုး ရေးဘဏ် (ADB) နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးက အကဲဖြတ်ထားသည်။ သို့သော် တိုးတက်လာသောနှုန်းသည်...
၃။ တတိယမဏ္ဍိုင် တရုတ် – ပါကစ္စတန် စီးပွားရေးစင်္ကြံ(CPEC) တရုတ် ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးကို ‘သံမဏိညီအစ်ကိုများ ဆက်ဆံရေး’၊ ‘မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်ဆက်ဆံရေး’ စသဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုးပေးထားကြသည်။ ဤဆက်ဆံရေးမှာ လူဦးရေပထမအများဆုံးနိုင်ငံနှင့် ဆဋ္ဌမအများဆုံးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခု၏ ဆက်ဆံရေးလည်းဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ်ကြာ...
Articles / Education / Uncategorized
ကျင့်ဝတ် (Ethics) ကျင့်ဝတ် (Ethics) ဆိုသည်မှာ ယနေ့လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ၌ လူသားတိုင်း မည်သူမဆို စောင့်စည်းရမည့်၊ လူသားများ တန်ဖိုးထားသည့် လူ့ကျင့်ဝတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သာမန်လူတန်းစားများတွင် ကျင့်ဝတ် (Ethics) ကို အလေးထားခြင်း၊ မထားခြင်းမှာ သိသာထင်ရှားမှုမရှိလှ...
Page 146 of 266« First«...102030...144145146147148...160170180...»Last »